Silungiselele labo abafuna ukufunda izikole zolimi lwesiJalimane eBerlin, eJalimane. Inkambo Ehamba phambili yaseJalimane eBerlin Sincoma ukuthi ubuyekeze ngokucophelela i-athikili yethu enesihloko. Ngalesi sihloko, sizozama ukunikeza ulwazi mayelana nezikole ezingcono kakhulu zokonga izilimi ezintathu eBerlin, ezihlinzeka ngemfundo ngesiJalimane jikelele, zithola amaphuzu aphezulu ngokwamazwana abafundi nalapho izimo zokuphila zilula khona.
Module Course Berlin - F + U Academy Yezilimi
Inkambo yaseJalimane, eyavulwa ngo-2013, iphakathi kwalezi ezincanyelwayo ngenxa yezomnotho nemfundo yayo, yize yintsha kunezikole eziningi zezilimi. Esikoleni solimi, ubukhulu besigaba sekilasi bungabafundi abayi-15, kanti iqembu labafundi lineminyaka engama-16 ubudala, ngaphezulu kwe-20. Isikhathi esiphelele salezi zifundo, esihlinzeka ngoqeqesho ngoMsombuluko nangoLwesihlanu, siyehluka phakathi kwamaviki 1-52. Kunezifundo eziyi-45 zemizuzu engama-10 ngeviki.
I-BWS Germanlingua Berlin - ukuphinyiselwa kwesiJalimane
Ngenye yezifundo zolimi ezonga imali kakhulu eBerlin. Yavulwa ngo-1984 futhi iyaqhubeka nokusebenza ngamagumbi okufundela ayi-9. Esikoleni solimi esihlinzeka ngemfundo yawo wonke amazinga, ubukhulu besigaba obumaphakathi bungu-1 nobukhulu 2. Isikole solimi, esilinganisweni seminyaka saso siphakathi kuka-16-25, senza iqembu liqale abafikayo njalo ngoMsombuluko. Isikhathi sesifundo sithatha amasonto angama-48 esewonke futhi kuyabonakala ukuthi kunezifundo ezi-45 zemizuzu engama-3 ngeviki. Isikole solimi, esibeka izifundo ngoMsombuluko nangoLwesihlanu weviki, singaba namaholide anqunyiwe futhi kuzoba ngcono ukuthi ungazikhethi izifundo ngalezi zinsuku. Uma ucabanga ukukhetha isikole solimi, kuyasiza ukufunda ngamaholide kusengaphambili.
I-GLS German Language School Berlin - Inkambo Ejwayelekile
Isikole solimi eBerlin savulwa ngo-1983 futhi manje sisebenza ngamakilasi angama-50. Isebenza kuzo zonke izindawo zemfundo yolimi lwangaphandle njengokukhuluma, ukulalela, ukubhala, ukufunda, ukubiza amagama, uhlelo lolimi nolwazimagama. Usayizi wekilasi emakilasini angama-8, ubukhulu be-12. Isikole solimi, esinabafundi abaphakathi kweminyaka eyi-18-27, sihlinzeka ngezifundo zeqembu lasekuseni. Isikhathi sokuqeqeshwa siyahluka phakathi kwamasonto e-1-52 futhi kuvulwa iqembu elisha njalo ngoMsombuluko kubaqalayo. Kunezifundo ezingama-45 zemizuzu engama-20 ngeviki.
Uhlelo Lwezemfundo eJalimane Nokusebenza Kohlelo Lwezemfundo LwaseJalimane